ip ကို hide ထားချင်လို့ — MYSTERY ZILLION
ip ကို hide ထားချင်လို့
January 2009 edited April 2009 in Sharing
ကျွန်တော် နည်းနည်း အရေးကြီးနေလို့ပါ...။
ကျွန်တော့် IP ကို website တွေကနေ မသိအောင် hide ထားချင်လို့ပါ..
hide my ip ဆိုတဲ့ software ကတော့ တကယ် အသုံးမ၀င်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်
Try using http://polysolve.com. It can hide your IP address.
Enjoy surfing anonymously!
http://mikozan.blogspot.com/ အဲဒီအစ်ကိုဘလော့မှာရေးထားတာတော့ရှိတယ်ဗျ ကျွန်တော်တော့မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး
freedom လိုမျို proxy Software တွေသုံးရင် မပေါ်ဘူးမလား..
kwinoo wrote: »
အဲဒီဆိုက်က ကိုယ့် Proxy ကိုသိသွားတာပေါ့ :P
ကိုယ့် ip ကို ဘယ်လိုဘယ်လိုမှကို ပြန်ဖော်မရအောင် ဖျောက်ထားလို့ရတဲ့နည်းမရှိဘူးလားဟင်....
ဟက်ကာဘိုးအေကြီးတွေတောင် အိုင်ပီပေါ်လို့ အဖမ်းခံနေရတော့
ကျေးဇူးပါပဲ အစ်ကိုတို့ရေ... :77:
ကျွန်တော် အစ်ကိုတို့ပေးတဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံရယ် ဆော့ဖ်၀ဲတွေရယ် သုံးလို့ အဆင်ပြေသွားပြီ :67:
ဘယ်ဆောဖ့်၀ဲ နဲ့အဆင်ပြေသွားတာလဲဟင် ....ပြောပြပေးနိုင်မယ်ဆိုပြောပြပေးပါလားဟင် ...
dun hav much time. so, i won't go detail.
1. for the first, go to any proxy site and download its script
2. then, create an account @ any freehosting
3. then, upload it
4. then, u can start ur surfing via this site
or u can get an idea by seeing the following movie
ဒီ firefox addon လေး စမ်းသုံးကြည့်ပါလား။ နည်းနည်းတော့ လေးသွားလိမ့်မယ်...
သာမန် အခြေအနေမျိုးမှာတော့ နှစ်ဆင့်လောက် ခံလိုက်မယ်ဆိုရင် လုံခြုံမယ် ထင်တာပဲ... :d
အားလုံးပဲ အတာမှာ ပျော်ကြပါစေဗျား....
လောကကြီးထဲမှာ ပုံသေတွက်လို့ မရဘူးလို့ ကျနော်ထင်တာပဲ.
ဥပမာ-အမှန်အတိုင်းပြောတာကောင်းတယ်....ဒါပေမယ့် နေရာတိုင်းတော့ မကောင်းဘူး ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။
တစ်ခါတစ်လေ လိမ်သင့်ရင် လိမ်ရတာပဲလေ...(တစ်ဖက်သားဆုံးရှုံး နစ်နာရမဲ့ အဖြစ်မျိုး ကို မဆိုပါ...)မလိမ်ဖူးတဲ့လူ ရှိကြရဲ့လား..ကျနော်မထင်ပါ...လူတိုင်း တစ်ခါခါတော့ လိမ်ဖူးကြမှာပဲ....ကျနော်လည်း IP address ဖျောက်ထားချင်တယ်..
IP address hide ထားနိုင်တဲ့ ၊ အတုပြျနိုင်တဲ့၊ ပြန်ဖော်ထုတ်လို့ မရနိုင်တဲ့..software/link များရှိရင် သနားကြပါအုံး....
sorry ဗျား..လျှာရှည်သွားတယ်.....ဖတ်မိလို့ အချိန်ကုန်သွားရင် sorry နော်....